Gudoomiyaha xisbiga bidixda oo is casilaya | Somaliska
Gudoomiyaha xisbiga bidixda (Vänsterpartiet) Lars Ohly ayaa ku dhawaaqay in uu iscasilayo bisha janaayo ka dib markii uu sheegay in doorashadii la soo dhaafay uu xisbigiisu ku fashilmay. Lars Ohly ayaa sheegay in doorashadii la soo dhaafay 3 arimood ay fashil ku ahayd. Kow waxa uu sheegay in aysan codod dheeri ah helin, labo in aysan awooda dowlada wax ka helin iyo in baarlamaanka ay soo galeen xisbi cunsuri ah oo uu ula jeedo Sverigedemokraterna.
Lars Ohly ayaa noqday gudoomiyaha xisbiga Bidixda sanadkii 2004 isagoo ka horna ahaa xogyaha xisbiga. Waxa uu baarlamaanka Sweden soo galay sanadkii 1998. Sanadihii dambe ayaa dhaliilo badan loo soo jeediyay ka dib markii xisbigiisa uu ku guuldareystay doorasha kasta oo dhacday intii uu talada hayay.
Waxaa horeba soo gudbiyay codsigooda in ay doonayaan in ay noqdaan gudoomiyaha cusub ee xisbiga sedex qof oo 2 rag tahay iyo mid dumar ah. Ragaan ayaa waxaa ku jira nin qaniis ah oo haddii la doorto noqonaya qaniiskii ugu horeeyay ee noqda gudoomiye xisbi.
Xisbiga Bidixda ayaa waxa uu ka mid yahay xisbiyada ugu soo dhaweynta fiican marka laga hadlayo soo galootiga iyagoo si weyn ugu dooda arimaha Soomaalida balse waxaa iska yar awoodooda oo waxay baarlamaanka ka haystaan 5.6% oo keliya.
Wadadi saxibadi kahoreeyay aa lagu socdaa haye
waxaan sugeynaa in Fredrik,Haglun iyo Jan Björklund
ayuna isa soo sallimaan si loo barto wajiyo iyo siyaasad cusub
Waa ka daroo dibi dhal hadiiba qaniis inuu hogaamiyo uu damcay xisbigaan cunsurigaanba u codaynaynaa maxaa yeelay wax badan asaa dhaama.
August 12, 2011 at 01:50
xisbiga bidixda fikrad aan ka heysto waa xisbi neceb so galootiga balse wa ila yaab in la dhaho xizbi cunsuriga somalida ayuu u ololeeyaa.